projet laika - FPMA Poitiers - Gestion De Projet
projet laika - FPMA Poitiers
“Fa raha misy manao azy hahalala, dia tsy mbola mahalala
araka izay tokony ho fantany akory izy” I Kor 8 : 2
FAMPAHAFANTARANA NY ASA SAHANINY
Najoron’ny FPMA ny Soritr’Asa Laika (na Projet Laika) mba hamolavola fiofanana ho an’ireo Laika ao
aminy mba hahatonga azy ireo ho tompon’andraikitra mahomby eo amin’ny seha-piasana misy azy ho
voninahitra Andriamanitra irery ihany.
Nankinina amin’ny Komity Nasionaly Projet Laika (na KNPL) izay manana Birao tarihin’ny Tale
voatendrin’ny Komity Maharitra, ny fitantanana izany Soritr’Asa izany.
Ireto avy ny mpikambana ao amin’ny KNPL :
Filoha Synôdaly FPMA
Masoivoho Birao Foibe/KNPL
Filoha na solontenan’ny Faritany FPMA 6
Filoha na solontenan’ny Sampana Iraisana FPMA 7
Filoha na solontenan’ny Fiaraha-Miasan’ny Mpitandrina (FMM)
Mpikambana hafa (natolotry ny KNPL) nahazo fankatoavana avy amin’ny Komity Maharitra
a) Mpitandrina sy Laika miara-miasa
Mifameno amin’ireo Soritr’Asa hafa nofaritan’ny FPMA (Soritr’Asam-Piangonana na SAP, V3M) ny
Soritr’Asa Laika. Ny fahitana ny solontenan’ny FMM ao amin’ny KNPL dia taratra izany fifamenoana izany.
Endrika rahateo ny rafitra présbytero-synôdaly arahin’ny FPMA izany.
Noho izany, mandritra ny fampiofanana izay entiny, ny Soritr’Asa Laika dia miezaka hatrany
mampifameno ny lafiny ara-panahy, izay ataon’ny Mpitandrina amin’ny lafiny ara-teknika izay sahanin’ny Laika.
b) Fiofanana sahaza ho an’ny rehetra
Manolotra fiofanana voavolavola
Mikasika ny fomba fiasa dia ezahina ny itondrana ny fiofanana mankany amin’ny ambaratonga FPMA
isan-karazany izay maniry izany : Nasionaly, Sampana Iraisana, Faritany na Tafo, indrindra rehefa
lohatenim-piofanana misokatra ho an’ny vahoakan’Andriamanitra rehetra no atao.
Maro ny fotoana azo anatanterahana izany fiofanana izany eto amin’ny FPMA : zaikabe, lasy na fotoana
hafa izay ifanarahana amin’ny ambaratonga mandray ny fiofanana.
Tsy vitan’ny manolotra lohatenim-piofanana ny Soritr’Asa Laika fa mandray ihany koa ny hetaheta
lohateny (themes) miainga avy amin’ny ambaratonga tsirairay eto amin’ny FPMA.
Hatreto dia ireto lohatenim-piofanana ireto no efa vonona ka nentina tany amin’ny Faritany maro (5/6)
eto amin’ny FPMA :
Ny toeran’ny Laika eo amin’ny Fiangonana
Ny rafitra FPMA
Ny fitondram-pivoriana mahomby
Ny famahana ny olana eo anivon’ny Fiangonana («la gestion du conflit au sein de l’Église»)
Ity lohateny ity kosa dia efa vonona ka nentina tamin’ireo Tafo FPMA 7 ao amin’ny Faritany Atsimo
Ny fahaiza-mifandray (« Savoir communiquer »)
Ankehitriny dia maro ireo ambaratonga FPMA izay nanavao ny mpiandraikitra ao aminy. Ity fiofanana
izay efa nosantarina tao amin’ny Tafo FPMA Grenoble ity dia azo atolotra ny ambaratonga maniry izany.
Lohatenim-piofanana natokana ho an’ny mpiandraikitra ao amin’ny Komity isan’ambaratonga sy/na
mpiandraikitra sampana rehetra
Ny fanekena ara-panahy (« engagement spirituel »)
Ny fomba fiasa (« mode de fonctionnement »)
Ny fomba fandraisana fanapahan-kevitra (« mode de prise de décision »)
Ny rafitra (« structure »)
FANOFANANA HO AVY
Ankehitriny ny KNPL, dia eo an-dàlam-pikarohana mpampiofana momba ny lohateny mikasika ny
« Leadership chrétien » na koa « Coaching chrétien »
Mangetaheta sy mila fiofanana mitohy ny vahoakan’Andriamanitra.
Ny tatitra tonga aty amin’ny KNPL dia mampiseho ny fahafaham-po feno avy amin’ireo
ambaratonga nandray fampiofanana.
Ny fampiofanana atao eo amin’ny ambaratonga iray dia matetika miteraka hetaheta vaovao eo
amin’izany ambaratonga izany.
Isaorana ireo izay efa nanolotena
Hatreto ankoatra ny fampiofanana nasionaly mikasika ny “Gestion du conflit” natao tamin’ny 2009, izay
niantsoana ny Pasteur Jacques POUJOL avy ao amin’ny FPF, mpampiofana za-draharaha amin’io taranja io, dia
isaorana an’Andriamanitra lehibe fa mpanompon’Andriamanitra eto anivon’ny FPMA daholo ihany no
nanatanteraka maimaim-poana ny asa fanofanana rehetra.
Isaorana azy ireo ny fanolorantenany amin’izany.
Entanina ireo izay maniry hiditra
Araka ny voalaza etsy ambony (iv. Zavatra tsapa) dia ny tsy fahampian’ny mpampiofana no mety sakana
amin’ny fanatanterahana ireo hetaheta vaovao miainga avy any amin’ny ambaratonga tsirairay.
Koa isan’ny asa lehibe ezahin’ny KNPL atao ny fanohizana fijerena mpanompon’Andriamanitra
(Mpitandrina na/sy Laika) afaka mampiofana arakaraky ny fanomezam-pahasoavana ananany ka mifandraika
amin’ny lohateny voahangon’ny Soritr’Asa Laika.
Izany hoe misokatra (fa tsy mihidy akory) tahaka ny lohatenim-piofanana ny ekipan’ny mpampiofana
ato amin’ny Soritr’Asa Laika.
Isan’ny tanjon’ny KNPL ny hananan’ny FPMA mpampiofana ho azy. Koa ho amin’izany dia ny
fanofanana mpampiofana (“formation de formateurs”) tontosain’ny za-draharaha (“professionnel”) no
isan’ny ezaka lehibe mbola miandry.
MANIFY NY EO AM-PELATÀNANA
Marihina fa ankoatry ny fanafarana mpampiofana avy any ivelany dia ny saran-dàlana sy ny
fampiantranoana ireo mpampiofana ihany no iantohan’ny tahirim-bolan’ny Soritr’Asa Laika hatramin’izao.
Fivoriana telefonika no fampiasan’ny KNPL eo amin’ny fanomanana sy famolavolana ireo fiofanana
rehetra nokarakarainy mba tsy hisian’ny fandaniana be loatra amin’ny fivezivezena satria efa fantatra
hatrany amboalohany fa tsy ho ampy hanatanterahana ny asa rehetra kinasa akory ny fanampiana arabola voaray avy tamin’ny BELK ho an’ny Soritr’Asa Laika (na Projet Laika). Marihina fa raha nitentina 4800 € teo
ho eo izany tamin’ny voalohany (4878,94 € tamin’ny volana septambra 2007) dia latsaky ny 800 € kosa sisa
izany ankehitriny (748,75 € ny volana Mey 2011).
MITOHY NY ASA
Eo anatrehan’ireo asa miandry sy mba ho enti-manatanteraka izany dia nanapa-kevitra ny KNPL fa
hitrandraka LOHARANOM-BOLA « MAHARITRA » ho azy (tsy hiantehatra intsony amin’ny fanampiana avy any
ivelany mety ho azo).
Amin’ity taona 2011 ity dia fivarotana tapakilan-tsakafo no tapaka fa atao. Manankery
hatramin’ny 31/12/2011 izany tapakila izany ary 25 € ny vidiny.
Toeram-pisakafoanana telo ao amin’ny “région parisienne” no azo isafidianana ka ampiasana izany
tapakila izany dia :
Restaurant Golden Wok : 27 Avenue de Fontainebleau 94270 Le Kremlin-Bicêtre
Restaurant “Fleur de Tana” : 27 rue de Neuilly 92110
Restaurant « Au Goût de Madagascar » : 90 route de Corbeil 91700 Sainte Geneviève des Bois
Fantatry ny KNPL fa tsy dia ny sakafo loatra akory no zava-dehibe amintsika fa ny fanahy
fanohanana ny asa koa dia isaorana mialoha antsika ny fandeferana amin’ny mety tsy fahalavorariana
V. TOHANO AMIM-BAVAKA MANDRAKARIVA NY ASA
Misaotra antsika amin’ny fitrotroana amim-bavaka izao ezaka iaraha-manana eto amin’ny FPMA
izao. Satria ny fikasana rehetra dia apetraka mandrakariva eo ambany fitahian’ny Tompo mba ho Azy
irery ihany ny voninahitra.
Ny Talen’ny KNPL
Fiofanana momba ny Fitantanana ara-bola ny tokan
boky torolalana - Church of the Nazarene
amin'ny alalan'ny fiovam-pon'ny mpanota, famerenana ireo niverin-dàlana, ary ny fanamasinana manontolo ny mpino. Ny tanjontsika dia tanjona ara-panahy, izany hoe, ny hitory ny filazantsara ho fanat...
Gazety Fafana laharana 152
dia nafana kosa ny andro ary nibaliaka ny masoandro tao amin’ity tanàna iray ity, ka toy ny mahazatra amin’ny fotoam-pialantsasatry ny mpianatra, dia nirotsaka nilomano na nitsotsotra teo amin’ny t...
Annuaire / Directory Page 1 sur 5 SOCIETE
Télecharger au format
Tetikasa Fampandrosoana ny tontolo ambanivohitra amin`ny
rondelles washers h
Jereo eto ny FANDAMINANA
Ora hisakafoanana sy fandaminana